ဗိုက်အဆီကျဖို့အတွက် မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် (၃) ချက် - For her Myanmar
ဗိုက်အဆီကျဖို့အတွက် မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် (၃) ချက်
အမယ် လေ့ကျင့်ခန်းကျမလုပ်ဘူး၊ ဒါမျိုးက ချက်ချင်းကိုပြေးဖတ်တော့တာပဲနော်။ မပူနဲ့ အခုဆောင်းပါးကလည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးဦးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တခြားဟာတွေနဲ့မတူတာက ဒီဆောင်းပါးမှာကကျတော့ လေ့ကျင့်ခန်းဘာညာမလုပ်ခင် လုံးဝအခြေခံအချက်တွေကို ဆွေးနွေးသွားမှာဆိုတော့ ယောင်းတို့လည်း စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ နှင်းတို့အားလုံး (နီးပါးပဲဆိုပါတော့) Gym သွားတဲ့အခါကျရင် အဓိကအားဖြင့် အဆီချချင်တာက ဗိုက်ပဲမလား? ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီအဆီအကျချင်ဆုံးနေရာကပဲ ချရအခက်ဆုံးဖြစ်နေပြန်ရော။ ဆိုတော့ကား နှင်းရဲ့ Tips and tricks တွေကလည်းရိုးနေပြီဆိုတော့ အီးအားနဲ့ဗိုက်မရိုက်ခင် ဒါလေးတွေကို အရင်သိအောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဗိုက်က အခြေခံအားဖြင့် ရင်ဘတ်အောက်ပိုင်းကို ဗိုက်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အခေါက်ရှိတဲ့အပိုင်းကို ဗိုက်ရဲ့အောက်ပိုင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ နှင်း Gym မဆော့ခင်တုန်းကဆိုရင် ဗိုက်အောက်ပိုင်းပဲ အခေါက်ရှိပြီး ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းကတော့ ချပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှင်း Gym စဆော့တဲ့အချိန်မှာ ဗိုက်အောက်ပိုင်းကို ခြေထောက် ကောင်းကောင်းကန်တင်ပြီး ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းကိုတော့ ကြွက်သားထွက်ဖို့အတွက် အားပြုပြီးဆော့ခဲ့ပါတယ်။ (ဒါကြောင့် အပေါ်ဘက်ကြွက်သား ၄ လုံးကအရင်ထွက်လာတာပေါ့။) ဆိုလိုချင်တာက အကယ်၍ နှင်းသာဘုမသိဘမသိ ခြေထောက်မမြှောက်ဘဲ ဗိုက်ကို Belly ကြီးအားစိုက်ပြီး ထိုင်ရိုက်နေမယ်ဆိုရင် အပေါ်က ကြွက်သား ၄ လုံးထွက်နေသည့်တိုင် အောက်ဗိုက်က အခေါက်ရှိမြဲရှိဆဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ကျစ်တယ်လို့ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲနော့်။ ဒါကြောင့် ယောင်းလေးတို့ ဘာမှမဆော့ခင် ကိုယ့်ဗိုက်အခြေအနေကိုကြည့်ပါ။ သူများ Belly အခေါက် ၁၀၀၀ ဆိုတိုင်း ကိုယ်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်ကြည့်ပြီး လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်တတ်ပါစေ။
(၂) နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာပါ။
ကိုယ့်အခြေအနေတော့သိပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူများတွေက ဒါမျိုးမှမလုပ်တာ ငါမှားနေပြီထင်တယ်ဆိုပြီး အများမိုးခါးရေသောက်တိုင်း ကိုယ်လိုက်မသောက်ပါနဲ့။ အရေးအကြီးဆုံးနောက်တစ်ချက်က သူများပြောတဲ့စကားတိုင်းကို လိုက်နားမထောင်ပါနဲ့နော်။ ကိုယ့်ပုံစံ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားနဲ့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို ကိုယ့်ဘာသာအသိဆုံးပါ။ ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိဆိုသလို ကိုယ်ပင်ပန်းသမျှ အရာမထင်ရင်လည်း အလကားပဲမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်ပဲ အဓိကလေ့ကျင့်ယူပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Related Article >>> ခန္ဓာကိုယ်အချိုးကျစေဖို့ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို ဘယ်အချိန်မှာစားရမလဲ ?
အစားအသောက်မီးလိုတောက်နေလို့ကတော့ ငါ့ဘာသာဘယ်လိုပူပူ နင့်အပူပါလားဆိုပြီး ဗိုက်ကပြန်တုပ်လွှတ်လိမ့်မယ် အရပ်ကတို့ရေး။ ဆီကြော်စာ၊ မာလာရှမ်းကော၊ ဟော့ပေါ့၊ ပီဇာ၊ ဘာဘေမစ်တီး စသည်ဖြင့် လက်ညှိုးထိုးမလွဲရှိနေတဲ့ ဒီနိုင်ငံကြီးမှာနေပြီး အစားအသောက်လျှော့ရတာကလည်း ဘယ်လိုတောင် ဆပ်လို့မကုန်တဲ့ဝဋ်ကြွေးလဲမေး? (ပြောရင်းနဲ့တောင် သွားရည်ယိုသွားတယ်မလား။ ယူတို့အားကြီးငတ်ပဲ။) ဒါပေမဲ့ လှတာမလှတာအပထား၊ ထိုင်နေရင်းဗိုက်မထောက်နေရင်ဖြစ်ပြီ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ကိုယ်ဝတ်ချင်တာလေး ဝတ်မယ့်အချိန် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ထွက်မနေရင် အဆင်ပြေပြီဟုတ်? ဒါဆိုရင်တော့ သူများတွေစားသလို ပရမ်းပတာ သွပ်ထည့်လို့ ဘယ်ရမလဲ? တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုကို စွန့်လွှတ်နိုင်ရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။ တစ်ပတ်မှာတစ်ရက် ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကြိုက်သလိုစားလို့ရပါတယ်။ (အဲဒီတစ်ရက်ကနေ မျိုးဆက်ဆက်ပြီး မပွားဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရင်ပေါ့။)
ဒါလေးတွေပါပဲ။ အရမ်းခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟားဒရား သေအောင်ကျိတ်ဆော့ခဲ့တာမျိုး မရှိဘူးဆိုတာတော့ယုံပါယူတို့ရယ်။ အိုင်ကသိပ်အပျင်းကြီးတာ။ ဒါပေမဲ့ သမားရိုးကျလမ်းထက် ကိုယ်တိုင်ဖောက်တဲ့လမ်းက တစ်ခါတလေမှာ ပိုပြီးပန်းတိုင်နဲ့ နီးသွားတာမျိုးရှိတာမို့ ခက်ခဲသည့်တိုင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရအောင်၊ ဖြစ်အောင် ရနိုင်၊ ယူနိုင်ကြပါစေလို့ နှင်းကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။
အမယျ လကေ့ငျြ့ခနျးကမြလုပျဘူး၊ ဒါမြိုးက ခကျြခငျြးကိုပွေးဖတျတော့တာပဲနျော။ မပူနဲ့ အခုဆောငျးပါးကလညျး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ တှနျးအားပေးဦးမှာပဲ။ ဒါပမေဲ့ တခွားဟာတှနေဲ့မတူတာက ဒီဆောငျးပါးမှာကကတြော့ လကေ့ငျြ့ခနျးဘာညာမလုပျခငျ လုံးဝအခွခေံအခကျြတှကေို ဆှေးနှေးသှားမှာဆိုတော့ ယောငျးတို့လညျး စိတျဝငျစားကွမှာပါ။ နှငျးတို့အားလုံး (နီးပါးပဲဆိုပါတော့) Gym သှားတဲ့အခါကရြငျ အဓိကအားဖွငျ့ အဆီခခြငျြတာက ဗိုကျပဲမလား? ဒါပမေဲ့လညျး အဲဒီအဆီအကခြငျြဆုံးနရောကပဲ ခရြအခကျဆုံးဖွဈနပွေနျရော။ ဆိုတော့ကား နှငျးရဲ့ Tips and tricks တှကေလညျးရိုးနပွေီဆိုတော့ အီးအားနဲ့ဗိုကျမရိုကျခငျ ဒါလေးတှကေို အရငျသိအောငျဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး။
ဗိုကျက အခွခေံအားဖွငျ့ ရငျဘတျအောကျပိုငျးကို ဗိုကျရဲ့အပျေါပိုငျးနဲ့ အခေါကျရှိတဲ့အပိုငျးကို ဗိုကျရဲ့အောကျပိုငျးလို့ ချေါပါတယျ။ နှငျး Gym မဆော့ခငျတုနျးကဆိုရငျ ဗိုကျအောကျပိုငျးပဲ အခေါကျရှိပွီး ဗိုကျအပျေါပိုငျးကတော့ ခပျြပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နှငျး Gym စဆော့တဲ့အခြိနျမှာ ဗိုကျအောကျပိုငျးကို ခွထေောကျ ကောငျးကောငျးကနျတငျပွီး ဗိုကျအပျေါပိုငျးကိုတော့ ကွှကျသားထှကျဖို့အတှကျ အားပွုပွီးဆော့ခဲ့ပါတယျ။ (ဒါကွောငျ့ အပျေါဘကျကွှကျသား ၄ လုံးကအရငျထှကျလာတာပေါ့။) ဆိုလိုခငျြတာက အကယျ၍ နှငျးသာဘုမသိဘမသိ ခွထေောကျမမွှောကျဘဲ ဗိုကျကို Belly ကွီးအားစိုကျပွီး ထိုငျရိုကျနမေယျဆိုရငျ အပျေါက ကွှကျသား ၄ လုံးထှကျနသေညျ့တိုငျ အောကျဗိုကျက အခေါကျရှိမွဲရှိဆဲ ဖွဈနဦေးမှာပါ။ ဒါဆိုရငျ ကဈြတယျလို့ ဘယျပွောလို့ရမလဲနေျာ့။ ဒါကွောငျ့ ယောငျးလေးတို့ ဘာမှမဆော့ခငျ ကိုယျ့ဗိုကျအခွအေနကေိုကွညျ့ပါ။ သူမြား Belly အခေါကျ ၁၀၀၀ ဆိုတိုငျး ကိုယျလိုကျမလုပျပါနဲ့။ ကိုယျ့အခွအေနကေိုယျကွညျ့ပွီး လိုတိုးပိုလြှော့လုပျတတျပါစေ။
(၂) နညျးမှနျလမျးမှနျဖွဈအောငျ ကိုယျ့ဘာသာလလေ့ာပါ။
ကိုယျ့အခွအေနတေော့သိပါရဲ့။ ဒါပမေဲ့ သူမြားတှကေ ဒါမြိုးမှမလုပျတာ ငါမှားနပွေီထငျတယျဆိုပွီး အမြားမိုးခါးရသေောကျတိုငျး ကိုယျလိုကျမသောကျပါနဲ့။ အရေးအကွီးဆုံးနောကျတဈခကျြက သူမြားပွောတဲ့စကားတိုငျးကို လိုကျနားမထောငျပါနဲ့နျော။ ကိုယျ့ပုံစံ၊ ကိုယျလိုခငျြတဲ့အနအေထားနဲ့ ကိုယျ့ပနျးတိုငျကို ကိုယျ့ဘာသာအသိဆုံးပါ။ ကိုယျ့ဝမျးနာကိုယျသာသိဆိုသလို ကိုယျပငျပနျးသမြှ အရာမထငျရငျလညျး အလကားပဲမို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မကျြခမြေပွတျစောငျ့ကွညျ့ပွီး နညျးမှနျလမျးမှနျဖွဈအောငျပဲ အဓိကလကေ့ငျြ့ယူပါလို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
Related Article >>> ခန်ဓာကိုယျအခြိုးကစြဖေို့ ဘယျလိုအစားအစာတှကေို ဘယျအခြိနျမှာစားရမလဲ ?
အစားအသောကျမီးလိုတောကျနလေို့ကတော့ ငါ့ဘာသာဘယျလိုပူပူ နငျ့အပူပါလားဆိုပွီး ဗိုကျကပွနျတုပျလှတျလိမျ့မယျ အရပျကတို့ရေး။ ဆီကွျောစာ၊ မာလာရှမျးကော၊ ဟော့ပေါ့၊ ပီဇာ၊ ဘာဘမေဈတီး စသညျဖွငျ့ လကျညှိုးထိုးမလှဲရှိနတေဲ့ ဒီနိုငျငံကွီးမှာနပွေီး အစားအသောကျလြှော့ရတာကလညျး ဘယျလိုတောငျ ဆပျလို့မကုနျတဲ့ဝဋျကွှေးလဲမေး? (ပွောရငျးနဲ့တောငျ သှားရညျယိုသှားတယျမလား။ ယူတို့အားကွီးငတျပဲ။) ဒါပမေဲ့ လှတာမလှတာအပထား၊ ထိုငျနရေငျးဗိုကျမထောကျနရေငျဖွဈပွီ ဟုတျတယျဟုတျ? ကိုယျဝတျခငျြတာလေး ဝတျမယျ့အခြိနျ ရုပျပကျြဆငျးပကျြ ထှကျမနရေငျ အဆငျပွပွေီဟုတျ? ဒါဆိုရငျတော့ သူမြားတှစေားသလို ပရမျးပတာ သှပျထညျ့လို့ ဘယျရမလဲ? တဈခုလိုခငျြရငျ တဈခုကို စှနျ့လှတျနိုငျရမှာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ စိတျမပူပါနဲ့။ တဈပတျမှာတဈရကျ ကိုယျကွိုကျတာကို ကွိုကျသလိုစားလို့ရပါတယျ။ (အဲဒီတဈရကျကနေ မြိုးဆကျဆကျပွီး မပှားဘူးဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျရငျပေါ့။)
ဒါလေးတှပေါပဲ။ အရမျးခကျခကျခဲခဲကွီးမဟားဒရား သအေောငျကြိတျဆော့ခဲ့တာမြိုး မရှိဘူးဆိုတာတော့ယုံပါယူတို့ရယျ။ အိုငျကသိပျအပငျြးကွီးတာ။ ဒါပမေဲ့ သမားရိုးကလြမျးထကျ ကိုယျတိုငျဖောကျတဲ့လမျးက တဈခါတလမှော ပိုပွီးပနျးတိုငျနဲ့ နီးသှားတာမြိုးရှိတာမို့ ခကျခဲသညျ့တိုငျ ကိုယျဖွဈခငျြတာကို ရအောငျ၊ ဖွဈအောငျ ရနိုငျ၊ ယူနိုငျကွပါစလေို့ နှငျးကဆုတောငျးပေးပါတယျရှငျ။
Tags: abs, belly, bodygoal, dream, experiences, flat, Healthy, lifestyle, tips
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့အတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ "Women of Tomorrow" Event
skincare အနေနဲ့ လူသုံးများနေတဲ့ soothing gel ရဲ့ တကယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ ?
Hnin Ei Oo March 11, 2019